Ezona zicelo zibalaseleyo zokujonga ukulala kwakho kunye nokuphumla ngcono | Ndisuka mac
Ezona zicelo zibalaseleyo zokujonga ukulala kwakho kwaye uphumle ngcono
UJose Alfocea | | Ezahlukeneyo
Wonke umntu sidinga ukulala nokuphumla, kwaye nangona iiyure ezisibhozo zokulala zicetyiswa, kuyinyani ukuba umntu ngamnye, ngokuxhomekeke kumsebenzi wabo, unokufuna ukulala kancinci. Nangona kunjalo, ngaphandle kwenani leeyure esizilalayo suku ngalunye, eyona nto ibalulekileyo kukuphumla kakuhle kuba akukho sizathu sokulala iiyure ezininzi ukuba sivuka singenaludwe, sidiniwe, sinamahlaba, njl. Xa oku kusenzeka kuthi, kungekuphela nje ukuba siya kwenza kakubi kakhulu kwimisebenzi yethu ngaloo mini, siyakuba kwimeko engalunganga, silusizi, kwaye siza kudlulisela ezi mvakalelo kwabo basingqongileyo.
Njengoko ubona, ukulala kakuhle kunye nokuphumla sisidingo esingenakuphikwa esisaphandwa nanamhlanje. Ukungazisebenzisi iziyobisi okanye utywala, ukunqanda izinto ezivuselelayo ezinje ngekofu, iti okanye iziselo ezinamandla, kunye nokuhlala usebenza emini, zezinye zezitshixo zokulala ngcono. Kodwa ngaphandle kwako konke oku awungekhe uphumle ngendlela obufanele ngayo, mhlawumbi enye yezi zinto zilandelayo usetyenziso lokujonga ukulala kwakho kukunceda ukuba uphucule kancinci kancinci.
1 I-Mi Fit
3 Ukulala ++
4 Ukulala Pulse 2 Motion
Nangona sikwi-blog ene-Apple, siza kuqala ngolunye lweempawu zokhuphiswano, uXiaomi. Kulabo bafuna ukujonga ukulala kwabo kwaye bavavanye inqanaba labo lokuphumla ngaphandle kokuchitha imali egqithileyo, ndincoma Isandi sokulinganisa seMi Band 2 kunye nesicelo seMi Fit se-iPhone.
Ngexabiso elijikeleze i-25 okanye i-30 euro, Uya kuba nakho ukulandelela ngokupheleleyo ukulala kwakho, jonga iiyure zakho zobuthongo obunzulu kunye nokulala kancinci ubusuku ngabunye, jonga ukusuka kweliphi ixesha ukuya kweliphi ixesha olale ngalo, kwaye unokubona ngegrafu inkqubela phambili yeyure yakho yokulala ngeyure nobusuku ngobusuku. Oku izokukunceda ushiye imikhwa emibi ngasemva njengoko ubona ukuba ulale ngcono kwaye uphumle ngakumbi.
Ibhedi kunye nayo Ukujonga ilalaKutshanje kufunyenwe iApple yenye yezixhobo kunye nokusetyenziswa ukujonga ngokupheleleyo ukulala kwakho. Le nkampani inesilonda sokulala esibizwa ngokuba Ibhedi ekwi-3 enokufumaneka kwiApple ngexabiso le-149,95 euro.
Njengoko ubona emfanekisweni, inefayile ye- isivamvo slim kwaye bhetyebhetye ebekwe phakathi kwephepha kunye noomatrasi, phantsi komqamelo, kwaye uqokelela yonke idatha enxulumene nokulala kwethu, uyihlalutye kwaye uyithumele kwisicelo sayo se-iPhone.
Uhlalutyo lwale datha lwenziwa kumgaqo wesayensi I-ballistocardiography (BCG), olinganisa ukusebenza koomatshini bemiphunga, intliziyo, ukurhona, intshukumo, njalo njalo.
I-Beddit (yeModeli 3.0)Mahala
Ukuba unayo iApple Watch, nge Ukulala ++ awuyi kufuna enye into ukubeka esweni ukulala kwakho. Njengoko bendinazo nezixhobo zangaphambili, Ukulala ++ kuya kurekhoda amaxesha ethu obuthongo obunzulu kunye nokulala kancinci ngokusekelwe kukuhamba kwethu usebenzisa i-accelerometer ye  Bukela. Ukongeza, nje ukuba uvuke, iapp iyakubonisa olo lwazi kwaye ulungelelanise idatha kunye neMpilo okanye usetyenziso olisebenzisa nge HealthKit.
Njengoko sele uqikelele, into esezantsi kukuba kufuneka uqiniseke ukuba iwotshi ihlawuliswe ibhetri, kwaye kuya kufuneka uhlehlise ukuyihlawulisa elinye ixesha ngaphandle kobusuku.
Ukulala Pulse 2 Motion
Esi sisicelo esifana nesangaphambili, kodwa ngexabiso le- € 4,49. Ukulala Pulse 2 Motion yenza i ukulandela umkhondo wentliziyo yakho ngokusebenzisa ii-Apple Watch sensors kunye nentshukumo yakho ebusuku kwaye uhlalutye iziphumo ikubonisa uhlalutyo olunenkcukacha ntsasa nganye onokuyisebenzisa ukukhangela ukuba amanyathelo owathathileyo ayakunceda ulale ngcono.
Umkhondo wokulala-Ukulala Pulse 3€ 3,99
Ngokwendalo, le sisampulu encinci ye- izixhobo kunye nokusetyenziswa okuya kusinceda silale ngcono Enkosi ekubekweni esweni kwemijikelezo yethu yokulala, nangona kunjalo, inyani kukuba nokuba zilunge kangakanani kwaye zizigqibile ezi okanye ezinye iiapps, azisayi kusinceda nganto ukuba busuku ngabunye asilali oomatrasi esemgangathweni olungileyo osivumela ukuba siphumle njengoko kufanelekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ezona zicelo zibalaseleyo zokujonga ukulala kwakho kwaye uphumle ngcono
UJimmy Iovine unika udliwanondlebe olutsha malunga neApple Music kunye necandelo
I-Apple isungule ibhetshi elungileyo yee-AirPod eFrance